Barcelona Oo Ka Hadashey Wararka Sheegaya In Sergio Aguero Uu Ka Fariisanayo Ciyaaraha
HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo ka hadashey Wararka Sheegaya in Sergio Aguero uu ka Fariisanayo ciyaaraha
Barcelona ayaa beenisay wararka xanta ah ee sheegaya in Sergio Aguero uu qarka u saaran yahay inuu ku dhawaaqo inuu ka fariisanayo ciyaaraha isbuuca soo socda.
Aguero ayaa dhibaato dhanka neefsashada ah ka soo gaartay kulankii ay Barca la ciyaartay Alaves bishii hore garoonka Cump Nou, waxaana 42 daqiiqo lagu bedelay Philippe Coutinho.
Halyeyga Manchester City ayaa loo qaaday isbitaal si baaritaanno loogu sameeyo ka hor inta aan la shaacin inuu garoomada ka maqnaan doono ugu yaraan seddex bilood si uu u maro muddo indho-indhayn ah ka dib markii laga helay wadne xanuunka Wadnaha.
Warar naxdin leh oo ka soo baxaya Spain ayaa markii dambe sheegay in weeraryahanka uu doonayo inuu ka fariisto ciyaaraha maalmaha soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne ku xigeenka Barcelona Rafa Yuste ayaa beeniyay wararkaas sheegaya in Aguero uu u isticmaali doono seddexda bilood ee soo socota inuu go’aan ka gaaro dhaqaaqiisa xiga.
Yuste ayaa yiri: “Waan beeninayaa wararkaan, Aguero waxa uu heystaa seddex bilood si uu u arko sida xanuunka isku beddesho.”